မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည် (၂) ရေးနေဆဲပါ။ အထောက်အထားတွေကို ရှာဖွေပြီး တစ်ပတ်အတွင်း တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါး မပြီးခင် ကျနော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ စည်လုံးရေအတွက် ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ လူငယ်တွေဟာ တာဝန်မဲ့တာလား၊ အကြောက်ကြီးတာလား ဘာလဲတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဟာ အင်မတန် ယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတာ သိပါကြပါပြီ။ မွတ်ဆလင်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်။ သူတို့တွေကိုယ်တိုင် မွတ်ဆလင်ဘာသာအကြောင်း အမှန်အတိုင်း လူတွေကို ပြောပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဝါဒဆိုးကြီးကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ကျုပ်တို့လူငယ်တွေက အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ ရှောင်ပြေးနေပါတယ်။
ဘာကို ကြောက်နေတာလဲလို့ မေးချင်ပါတယ်။ လူဖြစ်လာရင် မိမိတို့ မျိုးဆက်တွေ အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ရမယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်လေမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကြောက်ပြီး မလုပ်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့အမေနဲ့ ညီမတွေကို ကုလားမယားငယ် အဖြစ်ခံမလား? လူဆိုတာ ရှက်တတ်ရတယ်။ မိမိရဲ့ဂုဏ်၊ မိမိတို့လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်ကို စော်ကားလာပြီဆိုရင် လုပ်သင့်တာ လုပ်ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ ရှက်စိတ်ရှိလား?
မြန်မာအချင်းချင်းကို .. ကချင်၊ ကရင်.. ရခိုင်.. ဗမာ . . ရှမ်း . .နအဖ . .. ဒီမိုဆိုပြီး တံဆိပ်အမျိုးမျိုးတပ်နေကြတယ်။ သတ္တိုတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ ကြည့်ပါ။ ကရင်တွေက “ခွေးဗမာ”တွေဆိုပြီး ဆဲတယ်။ ဗမာတွေကလဲ ရခိုင်တွေကို ရခွီးဆိုပြီး လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်တယ်။ ရှမ်းတွေကလဲ ငါတို့ရှမ်းက ဗမာတွေ လက်အောက်က လွတ်လပ်ရေး ရအောင်လုပ်မယ် စသဖြင့် ... စသဖြင့် မြန်မာအချင်းချင်း သတ္တိုတွေ ပြနေတာ။ အခုကုလားတွေကိစ္စမှာ ကရင်တွေက မွတ်ဆလင် ၀ါဒကို ဝေဖန်ရဲလား? ဗမာဆိုတဲ့ကောင်တွေကလဲ မွတ်ဆလင်တွေကို ဘာများပြောရဲလဲ? ရှမ်းတွေက မွတ်ဆလင်တွေ ရှမ်းမတွေကို မယားငယ်လုပ်နေတာလဲ အခုလိုပဲ အသံတိတ် နေမှာလား? ဟားဟား.. ဒါကြောင့်ပြောတာ ကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးက အချင်းချင်းပဲ သတ္တိုရှိတဲ့ အိမ်ကျယ်တွေ။ ရိုဟင်ဂျာတွေ လိမ်နေတာ ရှင်းရှင်းကြီးမြင်ပါလျက်နဲ့ ဘယ်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အသံထွက်ရဲလဲ? ပြောစမ်းပါဦး။ ဆီပုံးတွေမှာ ဗမာ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ဝေဖန်ရဲလဲ? ရိုဟင်ဂျာကိုဝေဖန်ရင်လဲ အဓိက တရားခံ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေကို မဝေဖန်ရဲဘူး မဟုတ်လား? နိုင်ငံရေး သမားတွေကလည်း နအဖခေါင်းဆောင်နဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေကို စောက်တင်းပြောရတာ ပါးစပ်အရသာခံနေတယ်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးကြတော့ ပါးစပ်ပိတ်နေတယ်။ (လက်တဆုတ်စာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဝေဖန်တာကို စာရင်းထည့်မပြောပါနဲ့။ တကယ်ဆိုရင် အမျိုးသားကိစ္စမှာ အင်တိုက် အားတိုက်လုပ်ရမှာ) အဲလောက်အထိ သတ္တိုကောင်းတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ။
မွတ်ဆလင်ဆိုတာ မာဖီးယားဂိုဏ်းတစ်ခုပါပဲ။ မာဖီးယားဂိုဏ်သားဝင်တွေ အဖွဲ့က အရှင်ထွက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ မွတ်ဆလင်လဲ ဒီလိုပါပဲ။ မာဖီးယားတွေဟာ လူသတ် သမားတွေပါ။ မွတ်ဆလင်လဲ အဲလိုပါပဲ။ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေဟာ မိန်းမတွေကို မုဒိမ်းကျင့် ဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။ မိုဟာမက်ကြီးနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက မုဒိမ်းကောင်တွေပါ။ မာဖီးယားတွေဟာ သူတို့ကို အဝေဖန်မခံပါဘူး။ မွတ်ဆလင်လဲ ဒီလိုပါပဲ။ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေဟာ အကြောက်တရားနဲ့ ထိမ်းချုပ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်လဲ ဒီလိုပါပဲ။ မာဖီးယားဂိုဏ်းဝင်တွေဟာ တရားမျှတမှုကို လုံးဝ အလေးမထားပါဘူး။ ဟုတ်ပြီ. . . ဒီမှာ ခေဏရပ်မယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ တရားမျှတမှုအလေးမထားတာကို အခုတင်ပြပါမယ်။
အစ်စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်းကိစ္စမှာ မွတ်ဆလင်တွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ချီတက်ဆန္ဒပြတာ တွေ့တယ်မဟုတ်လား? အဲဒါသူတို့က ပါလက်စတိုင်းတွေကို သနားလို့ထင်လို့လား? အစ်စရေးမတရားမှုကို ဆန့်ကျင်တယ် ထင်သလား? မွတ်ဆလင်တွေ အဲလောက် မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ မွတ်ဆလင်နဲ့ ဂျူး စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲ သိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မွတ်ဆလင်ဘက်က ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လုပ်နေတာ။ တိရိစ္ဆာန်ကျီးကန်းတွေလိုပဲ ၀ိုင်းအာတဲ့ သဘောပေါ့။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိစ္စကို အဓိက ကူညီနေတာ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူအင်အားနဲ့ ရခိုင်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားချက်တရပ်ပါ။ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေက မွတ်ဆလင်ဝါဒအတွက်ဆိုတာပဲ သူတို့သိတယ်။ အမှန်တရားဆိုတာလဲ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ တရားမျှတမှုဆိုတာလဲ သူတို့ မသိဘူး။ မာဖီးယားဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ စိတ်ထားပဲဗျ။ သူတို့မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငအပေါ် သစ္စာရှိဖို့လဲ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ (မိုဟာမက်တောင် သူ့မွေးစားအဖေ ဦးလေးကို ကျေးဇူးကန်းပြီး လပေါင်းများစွာ ဆဲခဲ့တာ သတိရပါ) လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး နောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မျက်နှာလဲ သူတို့ သတိမရဘူး။ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ မွတ်ဆလင်ဝါဒ အတွက်ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲ ယုတ်မာရပါစေ.. ဘယ်လောက်ပဲ ကောက်ကျစ်ရပါစေ.. လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒလဲ?
အဲလို သစ္စာမရှိတဲ့ ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေဟာ ဒီမိုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာ အဓိကနေရာတွေကို ရယူထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အင်အားကိုလျှော့တွက်လို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကြည့်မလား? NLD အမတ်တွေ ကြည့်မလား? ဒီမိုမီဒီယာ သတင်းထောက်တွေ ကြည့်မလား? မွတ်ဆလင်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာတွေ မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကနေ အစပဲရှိသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ပလီတက်ဆောက်တဲ့ အဖြစ်အထိကို ရောက်သွားမယ်။ ကုလားအုတ်ကြီး ဗျူဟာကို သူတို့ ကျင့်သုံးနေတာပါ။
မွတ်ဆလင်တွေကို အတင်းပြောရုံနဲ့ ဘာထူးမှာလဲ? ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ဖို့ အကြံရှိလဲ? ခင်ဗျားတို့မှာ အကြံရှိရင် ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပါ။ ကျနော်တို့တောသားနှစ်ယောက် နောက်ကလိုက်ပါမယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားတို့မှာ အကြံမရှိဘူးဆိုရင် ကျန်ာတို့ ပေးတဲ့အကြံအတိုင်းလုပ်ပါ။ လွယ်အိပ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ကျနော်တို့ အရင်ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားသလိုပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေ လိမ်ညာကြောင်း မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာကသိအောင် လှုပ်ရှားမှဖြစ်မယ်။ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ် Forum တွေမှာ၊ မြန်မာ Forum တွေမှာ၊ ဘလော့ဆီပုံးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ပြောကြားပါ။ ကိုထိုက်တို့ ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေတို့ ဘလော့ကိုလဲ အမျိုးသားရေးအတွက် ရပ်တည်ဖို့ နားချပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကနေ ထောက်ခံနေတဲ့ ဒီမိုမွတ်ဆလင် ဘလော့တွေကို ဆန့်ကျင်ပေးပါ။ ခင်ဗျားတို့ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတွေကို ရိုဟင်ဂျာကိစ္စရှင်းပြပါ။သူတို့တွေပါ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးမှာ ပါဝင်အောင်စည်းရုံးပါ။
ဘလော့ဆီပုံးတွေကို လိုက်ကြည့်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးပြောတဲ့သူက အရမ်းကို နည်းပါတယ်။ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲ မြင်ရတယ်။ လုံးဝကို အားမရဘူးဗျာ။ ကုလားတွေက လူနည်းစုဖြစ်ပေမယ့် ကျုပ်တို့ထက် ဆီပုံးနဲ့ ဘလော့တွေမှာ ပိုပြီးတက်ကြွနေတယ်။
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆီပုံးတွေမှာ တခြားမြန်မာတွေကို ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ဖို့ စည်းရုံးပါ။ တကယ်လို့ ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုရင် လုပ်ရပ်လေးတွေကိုလည်း တခြားလူတွေ အတုယူနိုအောင် ပြန်ပြောပြပါဦး။ ဥပမာ ဒီနေ့ ငါတို့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေ လိမ်တဲ့ အကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ကဲ.. လွယ်အိပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျ။ အိမ်ကျယ်လုပ်ချင်ရင်လဲ ခဏလေးအောင့်ထားပါ။
ကျနော်တို့ အချင်းချင်း စည်းလုံးရင် ကုလားတွေကို လုံးဝ ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ လူခြောက်သန်းပဲ ရှိတဲ့ အစ်စရေးဟာ ကုလားတွေ ပတ်လည် ၀ိုင်းနေပေမယ့် ကုလားတွေကို အနိုင်ကျင့်နေတာ ကျနော်တို့ အမြင်ပဲ။ ကျနော်တို့က လူသန်း ၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ကုလားနိုင်ငံက ဘေးမှာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်စည်းလုံးကျပါ။ အချင်းချင်း နားလည်ပေးကြပါ။ တစ်ဖက်ကို တစ်ဖက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ သိပ်မများပါနဲ့ဗျာ။ စဉ်းစားပါ. . . ကုလားတွေ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသွားရင် ထိုင်းလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ သတိထားပါ။ သင်ခန်းစာယူတတ်ပါစေဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:34 AM
ကိုဇော်မျိုး .. ကျေးဇူးပြုပြီး ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို အကြောင်းပြပြီး မြန်မာလူမျိုးကို နာမယ်မဖျက်ပါနဲ့ 
အလကားနေရင်း မွတ်စလင် ဗမာရိုက်ပွဲ ဖြစ်အောင်လုပ်မနေနဲ့ .. နိုင်ငံေ၇း လှည့်ချင်တိုင်း ကုလားဗမာတိုက်ပေးတာရှင့်အဖေသန်းရွေ လေးလသားကတည်းက အလုပ်တွေ
ကိုးကန့် တွေဝတွေ တရုတ်တွေ မန္တလေး တမြို့ လုံးမြိုနေပီ.. လ၀က နဲ့ ပေါင်းပီး မှတ်ပုံတင်လေးနဲ့..
မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို ဖျက်စီးနေတာရှင်ပြောပါလား .. ရိုဟင်ဂျာ ဆိုလည်း ရိုဟင်ဂျာပြော ..
မှတ်ပုံတင်က ပိုက်ဆံပေးရင် ရတယ်ပြောရအောင်..မြန်မာပြည်လူဦးရေ သန်း 50ကျော်မှာ မှတ်ပုံတင် လူတိုင်းရှိတယ်ထင်သလား
ပိုက်ဆံ ဒီလောက်ပေါများတယ် မှတ်နေလား ..
ရှင်လုပ်တာနဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အလကားအထင်သေးခံရတော့မယ်
ပြောချင်၇ာပြောလိုက်နဲ့ မဟုတ်တဲ့လူက ရှင့်ဘလော့က ဦးသန့်ပုံ ဦးနုပုံနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံမြင်ပြီး
ဒီကောင်တော့ ဒီမိုပဲဟေး..ဒီမိုတွေ မိုက်ရိုင်းတယ်ဟေး ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ ..
မြန်မာ့ ကိုးဦးအာဇာနည်ထဲမှာ လဲမွတ်စလင် ပါပါတယ်.
မြန်မာတွေကို မိုက်ရိုင်းတဲ့ လူတန်းစားပုံဖြစ်အောင်
ရှင် မလုပ်ပါနဲ့ ..
လူမျိုးပေါင်းစုံ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ သီးခံတရားနဲ့ ပေါင်းသင်း
ဆက်ဆံလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးပါ ..
ဗမာတွေစည်းလုံးဖို့ကိစ္စမင်းပထွေးသန်းရွှေကိုပြောဟေ့၊ မင်းပထွေးလုပ်နေလို့ ဗမာတွေမစည်းလုံးကြတာ၊ မင်းပထွေးအာဏာရှိနေသ၍ မြန်မာနိုင်ငံကို အရှေ့ ဘက်က တရုတ်သိမ်း၊ အနောက်ဖက်က ကုလားသိမ်းနဲ့ ကုန်မှာဘဲ၊
ကျနော်တို.ကတော. ကိုတောသား၂ယောက်နောက်မှာရှိပါတယ် ။ဆက်လုပ်ပါ ။(မြောက်ဥကလာသားများ)
ဇော်မျိုး ဇော်မျိုး 9/11 ကိတ်စတွေတုန်းကကျတော့ ကုလားဘင်လာဒင်ကို ကာကွယ်နေပြီး အမေရိကန်က ပဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်သလိုလိုနဲ့ခုကျတော့လည်း မြန်မာပြည်ထဲက အေးအေးနေတဲ့ ကုလားတွေနဲ့ ရန်တိုက် နေပြန်ပြီ ဖောက်သည်ရှာနေတဲ့ မိန်းမလိုပဲ ဟိုယိမ်းလိုက်ဒီယိမ်းလိုက်နဲ့ နအဖအကြိုက်လိုက်နေမှန်းသိသာတယ် ရွံစရာကောင်းလိုက်တာ၊ထွီ
Who is better and greater? said...
I don't care SPDC or democracy fighters. What i care is not to lose our land. Now, Kular can get good political profit from this stupid SPDC and brainless Demo..
Save our land! Heal our Buddhism!